Ac milan oo amaah ku Rabto xidiga barcelona amaahda kaga maqan ee Emerson.
Home Horyaalka Italy Ac milan oo amaah ku Rabto xidiga barcelona amaahda kaga maqan ee...
AC Milan ayaa xiiseyneysa inay la soo saxiixato daafaca Barcelona Emerson marka uu ka soo laabto amaahda uu kula joogo kooxda reer spian ee Real Betis, sida laga soo xigtay Calciomercato.
Rossoneri ayaa wadahadalo kula jirtay heshiis 22 jir ah xagaagii hore laakiin heshiiska amaahda ee Betis ayaa horey u jiray taas ayaana keentay in ay isaga baxaan qorshaha markaas.
Kooxda Serie A ayaa diyaar u ah inay soo nooleeyaan wadahadaladaas dhamaadka ahaa in kasta oo wax badan ay ku tiirsan yihiin qaabkii Diogo Dalot, kaasoo soo jiitay tan iyo markii uu amaah ugu soo biiray kooxda Manchester United oo laga yaabo inuu mustaqbal fog ku yeesho kooxda.
Emerson ayaa fursad ka helin barcelona tan iyo markii uu laga soo biiray kooxda reer brazil ee atletico miniero tan iyo markaas barcelona kaliya amaah ayeey u direysay maan siinin wax fursad ah uu isku muujiso iyagoo ka doorbiday Roberto oo qadka dhexe ah inuu ka ciyaaro nambarka 2aad sidoo kale waxaa jooga dest.
Previous articleChelsea oo qorsheyneysaa iibinta Ciyaatoy dhoor ah si ay u maalgaliso Erling Braut Haaland
Next articleArsenal oo ku dhow in ay heshiis la gaarto xidiga sporting thiago Tomas.